Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Daruuro sun leh oo dul martay Jarmalka kadib qarixii Kiimikada
Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Waxay ahayd maalin la yaab leh oo leh cirka buluugga ah ee Duesseldorf iyo Cologne, Jarmalka ilaa qarax ka dhacay beerta Kiimikada ee Leverkusen taasoo kicisay daruur sun ah si ay uga baxsato.
Toddobaadkii hore daadad ka dhacay isla gobolkaas ayaa sababay musiibo iyo dhimasho. Maanta waa qarax ka dhacay Chempark Leverkusen, oo ku yaal inta u dhaxaysa Duesseldorf iyo Cologne ee Gobolka Jarmalka ee Northrhine Westphalia.
Maanta qarax weyn ayaa dadka ku nool isla gobolka ku qasbaya qaab kale oo masiibo ah, taasoo kicineysa heerka feejignaanta ugu sarreysa kadib markii daruuro sumeysan ws kicisay.
Chempark -ka Waxay ku fidaysaa saddex magaalo oo Leverkusen, Dormagen iyo Krefeld-Uerdingen wadar ahaan cabbirkoodu yahay 13.3 kiiloomitir oo laba jibbaaran, oo ay deggan yihiin in ka badan 60 shirkadood oo ay shaqaaleysiinayaan 50,000 oo qof.
Warshadda caafimaad ee Bayer ayaa qayb ka ah dhismahan. Dhowr waddo oo waaweyn iyo jidadka tareenka waaweyn ee isku xira magaalooyinka iyo tareenada maxalliga ah ayaa isku xira aagagga waaweyn ee magaalo -weynta xagga indhaha iyo warshadda.
Saaka qarax aad u weyn ayaa kiciyay daruur sumeysan si ay u baxsato waxayna hadda u socotaa magaalooyinka Leichlingen iyo Burscheid oo ku yaal degmada jaceylka Bergischer. Magaalooyinka waxaa lagu yaqaan beelahooda hoose iyo bartamaha magaalada oo leh suuqeeda iyo kaniisadaha.
Hawl wadeenada Chempark goobta gudaha Leverkusen ayaa sheegay in sababta qaraxa uusan caddeyn.
Hay'adda Federaalka ee badbaadinta muwaadiniinta, iyo hay'adaha masiibooyinka ayaa ku tilmaamaya qaraxa inuu yahay xaalad aad khatar ugu ah dadka maxalliga ah, iyagoo dadka ku amraya inay gudaha joogaan oo ay xiraan albaabada iyo daaqadaha.